TANAMBAO-VERRERIE : Olona efatra voasambotra,Kalaky 3, basy PA 1 ary bala 153 sarona
Eny am-pelatanan’ireo jiolahy ao Toamasina ireo fitaovam-piadiana mahery vaika tahaka ny ananan’ny mpitandro filaminana. 10 février 2019
Nahazo loharanom-baovao ny polisy ao amin’ny boriborintany voalohany Toamasina tarihin’ny Kaomisera Rakotovao Jean Christian fa misy tokantrano iray mitahiry fitaovam-piadiana mahery vaika fampiasan’ireo jiolahy amin’ny fanafihana mitam-piadiana ao Toamasina renivohitra.
Ny zoma 8 febroary tokony ho tamin’ny 11 ora sy sasany antoandro, dia sarona tao amina tokantrano iray tao Tanambao-Verrerie ny kalaky 3, basy PA iray, bala kalaky miisa 122, bala PA miisa 31, sabatra 2. Mbola nahitana kojakoja halatra ihany koa tao amin’ilay trano. Toy ny baffle roa , lecteur roa, finday,… Olona efatra no voasambotra niaraka tamin’ireto fitaovam-piadiana mahery vaika ireto ka vehivavy ny telo amin’izany.
Mbola misy olona efatra eo ho eo karohina amin’izao raharaha izao. Nandritra ny fiantsoana mpanao gazety nataon’ny teo anivon’ny polisim-pirenena, nitondra fanazavana ny Kaomisera Rakotovao Jean Christian fa mitovy laharana amin’ireo balana kalaky sarona ireo ilay bala nitifiran’ny jiolahy an’ilay polisy tao Tanamborozano ny maraimben’ny alahady 6 janoary lasa teo iny. Azo ambara fa goavana izao vokatra azon’ny polisy tao Toamasina izao. Nanambara moa ny polisim-pirenena Toamasina fa mitohy ny fanadihadiana lalina amin’izao raharaha izao. Hofantarina ny toerana nivoahan’ireo bala sy fitaovam-piadiana mahery vaika ireo. Mitaky ny fivoahan’ny marina ny vahoaka. Ny vahoaka ao Toamasina izay miaina andriran’antsy isan’andro.
Mbola maro ireo jiolahy mandehandeha any
Ny alin’ny zoma 8 janoary io ihany, dia tokantrano iray tao Tanambao-Verrerie parisela 21/71 no nidirana jiolahy an-keriny. Efa-dahy nisaron-tava nirongo basy kalaky miisa efatra no nandroba tao amin’ilay tokantrano. Ilay ramatoa ihany no tao an-trano tamin’io fotoana io, ka afaka naka izay tian’izy ireo nalaina ny jiolahy. Nandrahona ny hamono ireo olon-dratsy raha niantso vonjy ny tompon-trano. Naharitra 15 mn teo ho eo izy ireo tao anaty trano. Vola 3 300 000 Ar sy vola vahiny manodidina ny 250 euros no lasa tamin’izany. Alohan’ny handeha dia mbola niteny ireo jiolahy hoe : " lasa izahay fa amin’ny manaraka indray miverina". Porofo io tranga tao Tanambao-Verrerie io fa na dia teo aza ny fahatraran’ny polisy ireo kalaky sy Pa ary bala marobe ireo, dia mbola misy fitaovam-piadiana mahery vaika maro eny am-pelatanan’ireo jiolahy ao Toamasina amin’izao fotoana izao. Mbola asa goavana arak’izany ny miandry ny mpitandro filaminana ao an-toerana.
Iray namoy ny ainy, nitohana tanteraka ny fifamoivoizana KAMIAOBE NIFANDONA TANY AMIN’NY RN2 (158) 19 août 2019 Nokendain’ilay jiolahy ilay ramatoa, lasa ny entana sarobidy rehetra AMBOHIDRAPETO (120) 19 août 2019 Efa any am-ponja vonjimaika ilay tovolahy FANOLANAN-JAZA TENY AMIN’NY PORT (115) 22 août 2019 Olona 4 namoy ny ainy, 19 naratra mafy LOZAM-PIFAMOIVOIZANA TAO MAEVATANANA (111) 20 août 2019 Tsy mitombina ny filazana fa nahita lohan’olona maty ilay ankizivavy TONIA MPAMPANOA LALANA (85) 21 août 2019 Tra-tehaka ireo 3 lahy saika hanondrana volamena an-tsokosoko NOSY BE HELL-VILLE (82) 22 août 2019